Zimbabwe’s Tobacco Rebounds Amid Worries Over Health, Labor – NBC10 Philadelphia
By Farai Mutsaka	• Published April 28, 2022 • Updated on April 28, 2022 at 12:52 am
Zimbabwe, Africa’s biggest tobacco grower and one of the world's top exporters of the nicotine leaf, has opened its selling season for the crop amid pledges to fight deforestation and child labor in response to pressure from rights groups, environmentalists and international buyers.
This year's crop is expected to be about 10% and 15% smaller due to unfavorable weather, according to one of the country’s biggest merchants TSL Limited.
Tobacco is one of Zimbabwe's biggest earners of foreign currency alongside minerals such as gold and funds sent by Zimbabweans living outside the country. Tobacco earned Zimbabwe about $1.2 billion in exports last year and the government would like to see that increase “into a $5 billion industry by 2025,” Agriculture Minister Anxious Musuka said at the opening of the tobacco auction season at the end of March.
Corrine Brown 5 mins ago
Another problem is that many of the new smaller tobacco growers can't afford the electricity or coal needed to cure the tobacco leaves so they cut down nearby trees, causing Zimbabwe's forests to decline by about 15% to 20% annually in recent years, according to researchers.
Zimbabwean law sets the minimum age for employment at 16 while banning children under 18 “from performing hazardous work," but does not specifically ban children from handling tobacco.